Isi - Chengdu Zenghong Sci-Tech Co., Ltd
Anyị bụ onye ụlọ ọrụ ndú na technology, ọhụrụ na omenala imewe. Ọtụtụ puku ndị ahịa na-ahọrọ anyị gburugburu ụwa. TouchDisplays-arụ ọrụ na ISO9001 [2000 version] management usoro na OA, FCC, RoHS, dị iche iche ndị ọzọ na mba certifications! All ofụri usoro; development [R & D], usoro ngwa imewe, mmepụta, àgwà akara, n'ichepụta, lọjistik, akụkụ ọkọnọ na mgbe ahịa na ọrụ niile ọnọ site TouchDisplays ka amụma mkpuchi continuity na ụlọọrụ arụmọrụ niile ya ahịa.
TouchDisplays, onye ndú na nkà na ụzụ na ọhụrụ na-agbalị na-enye ndị kasị elu imewe customization wetara ezigbo ngwọta izute ahịa ina.
UK Branch Guzosie Ike.